Nhau - Musi waApril 26, iyo 2019 Shanghai Adult Exhibition yakavhurwa zviri pamutemo kuShanghai Multinational Sourcing Convention uye Exhibition Center!
Musi waApril 26, 2019 Shanghai Adult Exhibition yakavhurwa zviri pamutemo kuShanghai Multinational Sourcing Convention uye Exhibition Center!
Chiyero chegore rino chakakura, nemakambani anodarika mazana matatu anodakadza ari kutora chikamu, uye pasi rechitatu reimba yekuratidzira yakarongedzwa zvizere! Makambani ekunze akarongedzwawo munzvimbo yepasi rose yekuratidzira kudzikisa chinhambwe pakati pevateereri nemhando dzekunze.
Varatidziri vekumba vanonyanya kuita mabhizimusi emidziyo, zvekuronga mhuri uye mafuta ekumwaya, uyezve kune makambani mazhinji emadhora anouya pakuratidzira. Uye zvakare, kune zvakawanda zvigadzirwa senge SM uye bundle, uye yekushongedza maitiro edumba rakanyanya kwazvo-kumagumo!
Huwandu hwevashanyi vane hunyanzvi kuShanghai Adult Exhibition muna 2018 hwasvika pachinyorwa, kusvika pa8,321, kusanganisira 6,191 vekumba nyanzvi vashanyi uye 2,130 mhiri kwemakungwa vashanyi vehunyanzvi. "High professionalism" kwagara uzivi Shanghai International Adult Products Exhibition. Muna 2018, chiratidziro chakamisa nzvimbo yekuratidzira yepasi rese uye chakagamuchira mhinduro yepamusoro kubva kune akawanda epasirese anozivikanwa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, izvo zvisina kungokurudzira kusimudzira kudyidzana pakati peyekunze neyekunze chigadzirwa indasitiri Inopawo zvimwe zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. vashanyi vekuratidzira.
Muna 2019, iyo Shanghai Adult Exhibition ichaenderera ichisimudzira "kusimbisa pane Exhibitor zvido, kuremekedza vatengi 'mazano" kuti varambe vachiwedzera epamba uye epasirese kuedza kushambadzira, uye edza kukoka akawanda epasirese mabrandi kuti vatore chikamu muShanghai kuti vape zvimwe zvigadzirwa zvemhando yepamusoro vatengi vemumba; Panguva imwecheteyo, isu tichaitawo nepatinogona napo kukoka vatengi vepasirese kuti vauye kuShanghai pakuratidzira uye vape vatengi vehunhu hwakanyanya kune varatidziri vakuru
Midziyo yevakuru, mbatya dzemukati dzebonde, zvihwitsi zvebonde, zvigadzirwa zveSM, mafuta ekuzora, mishonga inouraya utachiona, mafuta ekuzora, mapiritsi, zvekugadzirisa zvekushandisa pabonde, kunonoka zvinwiwa, zvigadzirwa zvemukaka wakanaka;
Zvigadzirwa zvehutano hwekubereka
Zvepabonde zvinodzorwa zvinovaka muviri zvekudya, zvekubereka runako mishonga yekurapa, hutano hwekubereka uye zvipatara zvekunaka, kubata pamuviri kuongororwa uye kupindira, zvekurapa zvigadzirwa zvigadzirwa;
Makondomu, mapiritsi ekudzivirira kubereka, michina yekudzivirira kubereka;
Post nguva: Kubvumbi-27-2020
Ndapota siya email nesu uye isu tichava nekuonana mumaawa makumi maviri nemana.
Neboka reR & D renhengo gumi, tinosunungura zvinhu zvitsva nguva dzose, uye tinogutsa vatengi vazhinji muODM neOEM projekiti.Sefekitori, tinotora HUNHU, hwakanyanya kukosha, Zvizhinji zvezvinhu zvedu zvakapfuura FDA, CE, RoHS, uye SABS zvitifiketi .
G-Nzvimbo Vibrator, Zvevakuru Zvepabonde Zvidhori, Silicone Vibrators, Clitoral Vibrator, tsuro vibrators, Vakadzi Bonde Matoyi,